Maxaa ka jira in guddoomiyaha gobolka Banaadir la doonayo in xilka laga qaado | Raadgoob
Maxaa ka jira in guddoomiyaha gobolka Banaadir la doonayo in xilka laga qaado
howrkii maalmood ee u dambeeyey waxaa aad u soo xoogaysanayey inuu jiro khilaaf u dhaxeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhinac ah iyo madaxda dawladda Soomaaliya. Khilaafka ayaa la aaminsan yahay inuu dibadda u soo baxay wixii ka dambeeyey subaxnimadii Jimcaha, markaasoo qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha lagu shaaciyey in aan “dhulka dowladda la hibeyn karin, la bixin karin, lana wareejin Karin”.
Qoraalkaas waxaa lagu sii daray “Iyada oo la ilaalinayo hantida qaranka ee dhul, cir iyo bad waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in wixii dhul ah ee la iibiyay ama la hibeeyay ama la kireeyay kaddib 8-dii Febraayo, 2017 uusan haysan ogolaansho sharci ah. Haddii uu jiro [ay jiraan] muwaadiniin iibsad[t]ay ama kireystay dhul danta guud, waxaan u sheegayaa in iibsigaas uu yahay mid sharci darro ah.”
Image caption Qoaraalka Xafiiska Madaxweynaha
Shalay, xalay iyo maanataba shirar is daba joog ah ayaa socday, kuwaasoo ay yeelanayeen odayaal beesha uu guddoomiyaha gobolka ka soo jeedo ka tirsan oo dhinac ah, iyo kulammo iyaguna ka dhacayey madaxtooyada Soomaaliya.
Oday dhaqameedyada shirayey qoraalka hoose ayey soo saareen